बच्चा बोकेकी महिलालाई इन्स्पेक्टरको लाठि चार्ज (मिडियो सहित )
नेपाल प्रहरीका निरीक्षक देवीप्रसाद पौडेलले बच्चा बोकेकी महिलालाई लाठी हानेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
भिडियोमा देखिएका बेला उनी बच्चासहित छिन् । पौडेल महानगरीय प्रहरी वृत्त, भैंसेपाटीका इञ्चार्जको रुपमा कार्यरत छन् । अर्काको घरमा छिरेर हुलहुज्जत र तोडफोड गरेपछि सामान्य बल प्रयोग गरिएको पौडेल बताउँछन् ।
श्रेष्ठले आफूहरुलाई लाठीचार्ज गर्नुले प्रहरीको नियत प्रष्ट पारेको बताएकी छन् ।
को हो घटना ?
महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरमा भदौमा खत्रीले तीन महिलाले आफूमाथि कुटपिट गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । मोबाइलसमेत लुटेर लगेको उनको दाबी थियो । उजुरीउपर सुनुवाई गर्ने क्रममा अन्य दुई जना भागे भने शाहसँग प्रहरीले सोधपुछ गर्‍यो ।
ललितपुर प्रहरीले दुवै पक्षलाई राखेर ६ पटकसम्म छलफल गरायो । महिलाले खत्रीलाई छोराछोरी पढाउन २० लाख रुपैयाँ पनि दिएको दाबी गरेकी छन् । त्यो पनि फिर्ता पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।
कानूनतः नाता प्रमाणितका लागि अदालत जानुपर्छ । यद्यपि, दुई पक्षबीच छलफलबाट कुनै निकास ननिस्किएपछि प्रहरीले घटनामा चासो दिन छाडेको थियो ।
भिडियो सौजन्य ःRhythm Online TV
ओहो..!के गरेको यो नेपाल प्रहरी ले..??
Gepostet von Durga Pangeni am Donnerstag, 27. Februar 2020